Ilegharị Anya n’Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na United States
A na-ahazi ọrụ Ndịàmà Jehova na-arụ n’ụwa niile. Ndị mmadụ bịa ilegharị anya, a na-egosi ha gbasara otú ọrụ anyị si gaa n’oge ndị gara aga na otú o si aga ugbu a.
A na-ese ihe ndị na-adị n’akwụkwọ anyị, na-emepụtakwa vidio na ihe ndị a na-egere egere. A na-asụgharịkwa akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’asụsụ Ndị Ogbi nke America. Ndị mmadụ bịa ilegharị anya, a na-akọrọ ha gbasara ụlọ akwụkwọ Baịbụl ndị a na-enwe na Patterson.
Bido na Mọnde ruo na Fraịdee
A na-ebi akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl. A na-ebi ihe karịrị nde iri abụọ na ise kwa afọ, na-ebugakwara alaka ụlọ ọrụ ndị e nwere ná mba dị iche iche akwụkwọ ndị e biri n’ihe karịrị narị asụsụ atọ na iri isii. A na-ebugakwara ọgbakọ Ndịàmà Jehova karịrị puku iri na ise akwụkwọ na United States, Canada, nakwa na Caribbean.
Ilegharị Anya n’Ụlọ Ọrụ Anyị Ndị Dị na United States